नयाँ वर्षमा कार किन्दै हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् विभिन्न कम्पनीका अफर
नयाँ वर्षका अवसरमा विभिन्न गाडी कम्पनीहरुले आकर्षक अफरहरु ल्याएका छन्। नयाँ वर्ष र चाडपर्वका समयमा गाडीको बिक्री बढी हुने गरेकाले कम्पनीहरुले ग्राहकलाई तान्न यस्तो बेला विभिन्न आकर्षक अफरहरु ल्याउने गरेका छन्।
छुटसहितका यस्ता अफरले ग्राहकलाई आफ्नो ब्रण्डको बारेमा चिनाउन मद्दत पुग्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ। हुण्डाई मोटर्सको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका मार्केटिङ डेपुटी जनरल म्यानेजर रुपेश भट्ट ग्राहकलाई गाडीका विशेषताबारे जानकारी गराउने अवसर पनि नयाँ वर्षको अफरले मद्दत पुग्ने बताउँछन्।
‘प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमका लागि नयाँ वर्ष होस् वा विभिन्न चाडपर्व, विभिन्न कम्पनीले अफरहरु ल्याएका हुन्छन्’ उनले भने ‘हाम्रा लागि यो प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम पनि हो, ग्राहकलाई जानकारी र केही सुविधा पाउने अवसर पनि हो।’
हेरौँ कुन कारमा के छ अफर ?
नेपालका लागि हुण्डाई मोटर्सको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले नयाँ वर्ष २०७४ लाई लक्षित गर्दै आफ्ना गाडी किन्नेलाई शून्य प्रतिशत व्याजदरमै फाइनान्सिङ सेवा उपलव्ध गराउने भएको छ। यसको मतलव ग्राहकले किस्ताबन्दीमा तिर्ने रकममा व्याज लाग्दैन।
ग्राहकले बैंकको शर्त पालना गरेमा एक हप्ताभित्र नै शून्य प्रतिशत ब्याजमा फाइनान्सिङ सुबिधा पाउने म्यानेजर भट्टले बताए। ‘यो योजनाले ग्राहकमाझ राम्रो प्रतिकृया पाउने हाम्रो विश्वास छ’ उनले भने।
साथै सम्पूर्ण हुण्डाई गाडीहरु ४ वर्ष निःशुल्क सर्भिसिङ र तीन वर्ष वारेन्टी सहित उपलब्ध गराइने उनले जानकारी दिए। लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले नेपालभरी १६ शोरुम तथा १७ सर्भिस सेन्टरमार्फत ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ।
रेनो कारको नेपालका लागि आधिकारिक बितरक एडभान्स अटो मोबाइल्सले नयाँ वर्षको अवसरमा ‘रेनो वाउ अफर’ सार्वजनिक गरेको छ। ‘मेक योर न्यू इयर अ रेनोल्ट वाउ ईयर, नउ ड्राइभ दि क्विड अर डस्टर एट लोएस्ट ईएमआई एभर’ नारा सहित आएको यो अफरले ग्राहकहरुमा उत्साह थपिने कम्पनीको दावी छ।
कम्पनीका अनुसार रेनोको क्विड र डस्टर गाडी किन्दा न्यूनतम मासिक किस्तामा क्रमशः २८ हजार दुई सय र १३ हजार तीन सय ५७ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। विभिन्न गाडीको मूल्य तथा मोडलअनुसार किस्ता रकम फरक फरक पर्ने कम्पनीले जनाएको छ। यसको लागि ८.९९५ वार्षिक ब्याज दरमा ग्राहकहरुले फाइनान्सको सुबिधा पाउनेछन्।
यसका साथै यो योजनामा दुई वर्षको निशुल्क सर्भिस, एक वर्षको निशुल्क सडक कर, सजिलो एक्सचेन्ज सुविधा तथा अतिरिक्त नगद छुटको व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।
डाट्सनको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता पायोनियर मोटोकर्पले ‘बाई नाओ प्ये लेटर’ योजना ल्याएको छ। यो योजना अगाडिकै भए पनि नयाँ वर्षमा पनि यसले निरन्तरता पाएको कम्पनीका मार्केटिङ हेड स्वेता सिलवालले जानकारी दिइन्।
यो योजना अन्तर्गत ७.९९ प्रतिशत व्याज दरमा गाडी किन्न सकिने उनले बताइन्। त्यस्तै ३ महिनासम्मको ब्याज नलाग्ने र ब्याजदर ३ महिनापछि मात्र लागू हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत ३०, २०७३, ०६:३४:२६